12 ဥရောပရှိပန်းချီကားအများစု | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 12 ဥရောပရှိပန်းချီကားအများစု
လူတိုင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ဥရောပကနေ “တောင်ငယ်တို့သည်လှုပ်ရှား။ ၊”. အမှန်မှာအောက်ပါ 12 တောင်တို့သည်သင့်ကိုရွှင်လန်းစေ။ ၊. ကျော်ကြားသော Alps နှင့် Pyrenees မှသည် ဝှက်ထားသောကျောက်မျက် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, တစ် ဦး တိုးမြှင့်အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကို join 12 ဥရောပရှိပါဆုံးတောင်တန်းများ.
1. ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Matterhorn တောင်
Gornergat မှ Rothorn တောင်ထိပ်သို့, Matterhorn ကို Zermatt ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုနှစ်သက်နိုင်သည်. Matterhorn နှင်းဖုံး ဦး ထုပ်နှင့်၎င်း၏တြိဂံပုံစံ, မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါသည့်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှုခင်းများကိုဖန်တီးပါ.
နွေ ဦး ရာသီသို့မဟုတ်ဆောင်းတွင်း၌တည်၏, ထင်ရှားသော Matterhorn သည်တောင်များရှိအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်ခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်. Matterhorn ကို Swiss Alps တွင်ရှာ။ သင်ရွေးနိုင်သည် တက်တက် 4,478 မီတာ, Zermatt မှ Hornli Hut သို့လူကြိုက်အများဆုံးလမ်းကြောင်းသို့သွားရန်.
Matterhorn တိုးမြှင့်ခြင်းသည်ဥရောပရှိအလှပဆုံးတောင်တက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, အစိမ်းရောင်ဆွစ်ဇာလန်မြက်ခင်းထဲမှာနက်ရှိုင်း. ဒါကြောင့်, သဘာ ၀ ၏လှပမှုကိုနှစ်သက်ရင်းလှပစွာရိုက်ယူရန်နှင့်သင့်အသက်ရှူရပ်စေရန်အစက်အပြောက်များစွာရှိလိမ့်မည်.
2. Lauterbrunnen ချိုင့်၌ Jungfrau, ဆွစ်ဇာလန်
လှပသော Lauterbrunnen ချိုင့်၌၎င်း, ၏မြေ 72 ရေတံခွန်များ, သငျသညျခမ်းနား Jungfrau တောင်တန်းတွေ့လိမ့်မည်. တွင် 4,158 မီတာ, Jungfrau သည် Bernese Alps တွင်အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သည်.
တစျဖနျ, တက်ရန်သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Jungfrau တောင်ပေါ်ရှုခင်းကိုဥရောပရှိအမြင့်ဆုံးတောင်ရထားမှရွေးချယ်နိုင်သည်. တစ်ဖက်မှ Mittelland အထိ Vosges အထိဖြစ်သည်, သင်၏အခြားတစ်ဖက်တွင် Aletsch ရေခဲမြစ်, လုံးဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ.
3. အရှေ့ Tyrol ခုနှစ်တွင် Grossglockner, သြစတြီးယား
အမြင့်ဆုံး Grossglockner တောင်အားဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည် 266 သြစတြီးယား၏ခေါင်မိုးဟုခေါ်သောအသေးငယ်ဆုံးထိပ်များ. ဤတောင်တန်းသည်ဥရောပရှိရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်တောင်ကိုမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသည်. အဆိုပါ Grossglockner မှာအရပ်ရှည်ရှည်ရပ်တယ် 3,798 မီတာ, နှင့် Grossvenediger မှာ 3,666 မီတာ, သြစတြီးယားမှာအလှဆုံးတောင်တန်းများကိုကြည့်ခြင်း.
ဒါတွေကိုတွေ့လိမ့်မယ်2Hohe Tauren ရှိကုမ္ပဏီကြီးများ အမျိုးသားဥယျာဉ်. ဤတွင်သင်သည်တောင်တက်စက်ဘီးစီးသွားနိုင်ပါတယ်, တောင်တက်သို့မဟုတ်ကျောက်တောင်တက်. ဤနည်းဖြင့်မည်သည့်ရှုထောင့်မှမဆိုမြင်ကွင်းများကိုသင်ကြည်ညိုလေးမြတ်နိုင်သည်.
တစ်ရထားနှင့်အတူ Landeck Ischgl မှဗီယင်နာ
မြူးနစ်သည်ရထားနှင့်အတူ Landeck Ischgl သို့
Salzburg တစ်ရထားနှင့်အတူ Landeck Ischgl ရန်
Zurich တစ်ရထားနှင့်အတူ Landeck Ischgl ရန်
4. ဥရောပရှိပန်းချီကားအများစု: အမြင့် Dachstein ခုနှစ်တွင် သြစတြီးယား
သြစတြီးယား၏ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်သည် Hoher Dachstein ဖြစ်သည်, ချစ်စရာကောင်း Halstatt မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်. Hoher Dachstein သည်ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီများတွင်ရှုခင်းအရှိဆုံးတောင်နှင့်ရေကန်ရှုခင်းများကိုပေးသည်. နွေရာသီမှာ, စိမ်းလန်းပြီးပွင့်လန်းသော karst တောင်ကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်. ဆောင်းတွင်းမှာ, တောင်ထိပ်ရဲ့နှင်းလျှောစီးသွားပါ.
သို့သျောလညျး, Hallstatt ရှိအလှပဆုံးတောင်ပေါ်ရှုခင်းများကိုကြည့်ရှုရမည်5ရေကန် Hallstatt ၏လက်ချောင်းအချက်. သင်Aprilပြီလမှစက်တင်ဘာလမှလာရောက်လည်ပတ်လျှင်, ပူနွေးသောရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအလွှာဝတ်ဆင်, ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်နှင်းကျခြင်းနှင့်အေးခဲခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်. သငျသညျပိုမိုအကျိုးရှိသောနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတှေ့အကွုံအဘို့အတက်လမ်းလျှောက်ပိုနှစ်သက်မဟုတ်လျှင် cable ကိုကားဖြင့်သင်ဤအံ့သြဖွယ်ရှုထောင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်.
မြူးနစ်တစ်ရထားနှင့်အတူ Hallstatt ရန်
အင်းဘရွတ်ခ်တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Hallstatt
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Hallstatt မှ Passau
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Hallen မှ Rosenheim
5. Chamonix-Mont-Blanc, ပြင်သစ်
Chamonix သည် Alps ရှိအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သည်. ရုံ 15 နယ်စပ်ကနေမိနစ်, Chamonix သည်ဆောင်းရာသီအံ့ land စရာဖြစ်သည်. ဒီမှာ, သငျသညျ Mont Blanc ၏ပါရှုခင်းများမှာပျောက်လွင့်လိမ့်မည်.
သင် Mont Blanc ရထားကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ် Chamonix မြို့ရှိကဖေးများနှင့်စားသောက်ဆိုင်များမှလှပသောမြင်ကွင်းများကိုလေးစားမိသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, သငျသညျ Aiguille du Midi သို့မဟုတ် Mer du Glace မှတက်နိုင်ဘူး. သငျသညျကောက်တစ်ခုခုကိုလှုပ်ရှားမှု, ပြင်သစ်ရှိအလှပဆုံးတောင်တန်းတစ်ခု၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှုခင်းများကိုနေရာတိုင်း၌သင်နှင့်အတူလိုက်ပါလိမ့်မည်.
6. ဥရောပရှိပန်းချီကားအများစု: Pyrenees
ခမ်းနားထည်ဝါသော Pyrenees များသည်လှပသောတောင်တန်းများကိုမြင်နိုင်သည်. တောင်ခုနစ်လုံးသည်ပြင်သစ်တွင်ရှိသည်, အဆိုပါ Vosges, ဂျူရာ, အဆိုပါ Massif ဗဟို, အဆိုပါ Armorican Massif, နှင့် Corsican Massif.
ဤတောင်တန်းသည်အလွန်ကြီးမားလွန်းသဖြင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာမှမြေထဲပင်လယ်သို့သင်တက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်. သင်သည်သာယာဝပြောသောရှေးဟောင်းမြို့များသို့သွားရောက်နိုင်ရုံသာမကဘဲ, ဒါပေမယ့်လည်းသင်ဟာနောက်ထပ်သဘာဝအရအံ့သြဖွယ်ရာလေးစားမှုကိုရရှိဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်. ဒီအံ့သြစရာက Grande Cascade de Gavarnie (သို့) Gavarnie ရေတံခွန်ပါပဲ. တစ်စက်နှင့်အတူ 422 မီတာ, ၎င်းသည်ဥရောပတွင်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးရေတံခွန်ဖြစ်သည်.
ထိုကွောငျ့, သင်၏ပုံများသည် National Geographic ဖြစ်သည်.
7. ဥရောပရှိပန်းချီကားအများစု: ပြင်သစ်တွင် Val Thorens
မြင့်သည်မှာ 2300 ပြင်သစ် Alps အတွက်မီတာ, Val Thorens နှင်းကျသောတောင်များသည်ဆောင်းရာသီတွင်အလှဆုံးတောင်ဖြစ်သည်. တောင်စောင်းလျှော, မီးအားဖြင့်ကိုကိုးပူပြင်းသည့်ခွက်တစ်ခုရှိခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ကေဘယ်လ်ကားကနေမြင်ကွင်းကိုခံစားခြင်း, အဆိုပါမြင်ကွင်းများအတော်လေးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်ကြသည်.
သို့သျောလညျး, အများစုမှာနှင်းလျှောစီးအတွက် Val Thorens သို့ခရီးသွားနေစဉ်, ဒါဟာအခြားမည်သည့်ရာသီအတွက်အတော်လေးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာပါပဲ. Tarentaise ချိုင့်ဝှမ်းသည်လှပသောအိမ်တွင်းအိမ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်, မြက်ခင်း, နှင့် Isere မြစ်, နောက်ကွယ်မှ Val Thorens တောင်များနှင့်အတူ, တစ်နှစ်ပတ်လုံးကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများဖန်တီးပါ.
8. အီတလီမှာ Dolomites
ဘယ်အချိန်မှာရွေးလို့ရတယ်7ကြည့်ရှုမှတ်, အရပျကိုရှုခင်းအတွက်အမှန်တကယ်အံ့မခန်းဖြစ်ပါတယ်. Dolomites တောင်တန်းများသည်အီတလီတောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်, ဥရောပရှိအလှဆုံးသဘာဝသယံဇာတများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်. ထို့အပြင်, ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတောင်တက်ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်.
Bolzano မှတစ်ရက်ခရီးသို့ Dolomites ကိုသင်ကြည်ညိုရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်, သို့မဟုတ်စက်ဝိုင်း ၂၀ ကီလိုမီတာခရီးတွင်. လှုပ်ရှားမှုများ, ပျော်ပွဲစားနှင့်ရုပ်ပုံအစက်အပြောက်, နှင့် တောင်တက်လမ်းကြောင်း, အဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်. အားလုံးကိုထိပ်ဆုံးသို့, အမြင်များကိုလုံးဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှိပါတယ်, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်အပေါ်မည်သည့်အချက်မှာ.
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းပြချက်အားလုံးအတွက်, Dolomites များသည်အီတလီတောင်တန်းများတွင်အားလပ်ရက်ခရီးအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်.
9. ဥရောပရှိပန်းချီကားအများစု: Wales ခုနှစ်တွင် Snowdon တောင်
Snowdon Mount ဟာလှပတဲ့အတွက်ကိုယ်ပိုင်လမ်းလျှောက်ခြင်း app ရှိတာမအံ့သြပါဘူး. Snowdon သည် Wales တွင်တည်ရှိသည်, ပြီးတော့ 6-8 နာရီတိုး, Snowdonia ရဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းများကိုသင်သဘောကျမိနိုင်သည်, အင်္ဂလိပ်, Pembrokeshire, နှင့်အိုင်ယာလန်.
ဖြည့်စွက်ကာ, ၏အမြင့်ကနေ 1085 မီတာ, သင်လည်းတတ်နိုင်လိမ့်မည် လှပသောရေကန်များအားလုံးကိုကြည့်ပါ. ဥပမာ, Cwellyn ရေကန်နှင့် Mynydd Mawr တို့သည် Cwellyn လမ်းကြောင်း၏အဆုံးတွင်အံ့မခန်းဖွယ်အမြင်များကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်.
10. ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင် Adrspach-Teplice
ချက်သမ္မတနိုင်ငံသည်အများအားဖြင့်လှပသောပရာ့ဂ်အဖြစ်လူသိများသည်. အလွန်နည်းသောအလွန်အံ့သြဖွယ်ရာ Bohemia နှင့်ရော့ခ်ကျေးရွာတို့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သာသိကြသည်, Adrspach-Teplice. Adrspach သည်ပိုလန်နယ်စပ်အနီးတွင်တည်ရှိပြီးနေရာတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝခံထိုက်သည် ဥရောပရဲ့အံ့သြဖွယ်သဘာဝအံ့ဘွယ်သောအမှု.
Adrspach-Teplice သည်ကျောက်ဆောင်များအလယ်ဗဟိုတွင်တည်ဆောက်ထားသောရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်, အရပ်ရှည်ရှည်စိုက်ထူ, labyrinths နှင့်အတူ, လိမ္မော်ရောင်စီး, နှင့်လမ်းကြောင်း. ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာကိုသာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် 1824. ထိုအချိန်မှစ။ ထူးခြားသောရှာသောခရီးသွားများအတွက်အထူး ဦး တည်ရာဖြစ်ခဲ့သည်.
ဒီမှာ, သငျသညျကွင်းဆက်လမ်းကြောင်းလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်, Gothic ဂိတ်နှင့်လျှို့ဝှက်ကျမ်းပိုဒ်များမှတဆင့်. အတွင်းမှအံ့သြဖွယ်ကျောက်ဆောင်များကိုအံ့ rock ဖွယ်ကောင်းပြီးအပြာရေကန်သို့ရောက်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမတူပါ. သင်သည်ဤrockရာကျောက်ဆောင်များအလယ်တွင်လမ်းလျှောက်နေရလိမ့်မည်, နွေရာသီမှာသွားလည်ပတ်တာအကောင်းဆုံး, နေ့ရက်များရှည်လျားခြင်းနှင့်အလင်းအများကြီးရှိပါတယ်အခါ.
11. လူဇင်ဘတ်မှာ Mullerthal ဒေသ
အချို့နှင့်အတူ ဥရောပ၌အလှဆုံးရှုထောငျ့, လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိ Mullerthal တောင်တန်းများသည်သာယာလှပသည့်လမ်းများနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနေရာများသို့ကမ်းလှမ်းသည်. သင်တောအုပ်ထဲသို့လမ်းလျှောက်အဖြစ်, ရေကန်များနှင့်စမ်းရေတွင်းအတိတ်, စိမ်းလန်းသောကျောက်တောင်ကုန်းများ, သငျသညျကလေးတစ် ဦး ရဲ့နတ်သမီးပုံပြင်သို့အရှိန်မြှရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်.
Mullerthal ဒေသသည်ဥရောပရှိအထူးရှုခင်းများနှင့်ရှုခင်းများရှိသည်. ရဲတိုက်, ဂူ, တံတားများ, နှင့်ရေတံခွန်များ, သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလှပသောအမြင်များရှိသည်. ထို့ကြောင့်, တောင်တက်သို့မဟုတ်စက်ဘီးစီး, အနည်းဆုံးရက်အနည်းငယ်အောင်သေချာပါစေ, Mullerthal ၏တောတောင်ရှုခင်းများကိုကြည်နူးလေးစားမိရန်.
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူလူဇင်ဘတ်မှ Antwerp
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူလူဇင်ဘတ်မှ Metz
12. ဥရောပရှိပန်းချီကားအများစု: Stanserhorn, ဆွစ်ဇာလန်
နှင်းဖုံးထိပ်, တောက်ပသောစိမ်းလန်းသောတောင်ကုန်းများ, ချိုင့်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျေးလက်အိမ်လေးတွေ, Stanserhorn မှအမြင်များသည်အချစ်ဆုံးဖြစ်သည်. Stanserhorn တောင်သည်အလွန်တင့်တယ်လှ၏ 20 လူဇင်ဘတ်မှရထားဖြင့်မိနစ် (၅) မိနစ်အကွာတွင်တည်ရှိပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေ့ခရီးဖြစ်သည် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်.
ဤတွင်သင်ကဆွစ်တောင်တန်းများနှင့်ရေကန်များ၏အံ့ဘွယ်သောမြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များအဘို့တောင်ထိပ်ရဲ့တောင်ထိပ်သို့ cable ကိုကားကိုယူနိုင်ပါတယ်. Stanserhorn ၏လှပသောတောင်တန်းများအပေါ်အမြင်များကိုအထင်ကြီးလေးစားရန်နောက်ထပ်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာကောက်ယူခြင်းဖြစ်သည် ပျော်ပွဲစားအစက်အပြောက်. ဤနည်းဖြင့်သင်သည်တစ်နေ့တာ၏အနားယူခြင်းနှင့်အလှအပနှင့် Alps တို့၌အသက်ရှူခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်’ လေကောင်းလေသန့်.
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူဇူးရစ်
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Lucerne မှ Bern
Geneva မှ Lucerne သို့ရထားနှင့်အတူ
တစ် ဦး ရထားနှင့်အတူ Lucerne မှ Konstanz
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏အားလပ်ရက်အစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည် 12 ရထားဖြင့်ဥရောပ၌ပါဆုံးတောင်တန်းများ.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပရှိပန်းချီကားအများဆုံးတောင်များထဲမှ ၁၂ "သည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုတင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fmost-picturesque-mountains-europe%2F‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အကောင်းဆုံး တောင်ကြီးမြို့ တောင်တန်း တောင်ကြီးမြို့ ပန်းချီဆရာ ပန်းချီ ရှုခင်း